sahakari – जनदिशा
janadisha April 7, 2019	No Comments Chitawan NewsFalful khetisahakari
जनदिशा सम्वाददाता, चितवन । भरतपुर बजारको करिब ६ कि.मि. पूर्वमा कालिका नगरपालिकाको वडा नं. १ मा अवस्थित आप्पा ब्यङ्क्वेट तथा रिसोर्टमा यही चैत्र ११ देखि १६ गतेसम्म करिब एक हप्ता पूर्वी चितवनका ८ वटा सहकारीहरु एउटा गम्भीर विषयमा छलफलमा व्यस्त थिए । तीनतीन दिन गरी दुई समूहमा विभाजन गरेर ११…
View More चितवनमा फलफूल र तरकारी बजारीकरणको प्रयास